အိုင်ဖုန်းကို ACTIVATION သော့ခတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို - IOS အတွက် - 2019
အိုင်ဖုန်းပေါ်မှာသော့ခတ်၏ activation ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Qt5core.dll ပြောင်းလဲနေသောစာကြည့်တိုက် Qt5 အစီအစဉ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မူဘောင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဤပတ်ဝန်းကျင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ application တစ်ခုကို run ရန်ကြိုးစားသောအခါထို့ကြောင့်ဤဖိုင်နဲ့ဆက်စပ်အမှားပေါ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်ထိုပြဿနာကို Qt5 ကိုထောက်ပံ့သောကို Windows အပေါငျးတို့သဗားရှင်းပေါ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
များစွာသောအခြား DLL-ဖိုင်တွေမအောင်မြင်မှုများနှင့်မတူဘဲ qt5core.dll နှင့်အတူပြဿနာများတိကျတဲ့နည်းလမ်းများတညျ့။ ပထမဦးဆုံး - အမှားဖြစ်စေတဲ့ကြောင်း executable file ကို, ပျောက်ဆုံးစာကြည့်တိုက်များဖိုလ်ဒါပြောင်းရွှေ့ဖို့။ ဒုတိယ - Qt ဖန်ဆင်းရှင်လို့ခေါ်တဲ့ shell ကိုမူဘောင်မှတဆင့်လျှောက်လွှာကို run ရန်။ ဒီ option နှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြပါစို့။
Method ကို 1: Qt ဖန်ဆင်းရှင်
တစ်ဦးလျှောက်လွှာရေးသားခြင်းသို့မဟုတ်အခြားပလက်ဖောင်းက porting ၏လုပ်ငန်းစဉ်လွယ်ကူချောမွေ့ရန် Qt ဖှံ့ဖွိုးတိုးပတ်ဝန်းကျင် Tool ကိုဖြန့်ဝေ။ ထို program နှင့်အတူထည့်သွင်းခြင်းနှင့်လည်း qt5core.dll လည်းမရှိရာတို့တွင်တပ်မက်လိုချင်သောအ DLL, run ဖို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Qt ဖန်ဆင်းရှင် Download
program ကို run လိုက်ပါ။ စာနယ်ဇင်းများ "File" နှင့် menu ကနေရှေးခယျြ "ဖိုင်တစ်ဖိုင်သို့မဟုတ်စီမံကိန်းကိုကိုဖွင့်ပြီး".
အဆိုပါစံပြတင်းပေါက် "Explorer ကို" ဖိုင်တွေတစ်ရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူ။ သငျသညျကို run ချင်သောအရင်းအမြစ် application ကိုသိုလှောင်သောဖိုင်တွဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်။ ဤသည် PRO format နဲ့ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်သင့်တယ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်၏လက်ဝဲ pane ထဲကကိုအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်အရင်းအမြစ်အချက်ပြသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်လိမ့်မည်။
(စီမံကိန်းဥပမာအသိအမှတ်ပြုမထားဘူး) မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လျှင် - Qt ဖန်ဆင်းရှင်ပတ်ဝန်းကျင်၏ installed ဗားရှင်းစီမံကိန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဖန်တီးလိုက်ပါပြီသောကြောင့်သေချာအောင်!
ထိုအခါ window ၏ left အောက်ခြေမှာကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့မော်နီတာတစ်ခုအိုင်ကွန်နှင့်အတူတစ်ခလုတ်ကိုလိုအပ် - ကခလုတ် Modes သာ switching များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အဲဒါကိုနှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "Issue".
Kuti ဖန်ဆင်းရှင်ဖိုင်များကိုပြင်ဆင်မှီတိုင်အောင်ခဏစောင့်ပါ။ ဒီဖြစ်ပျက်သည့်အခါအစိမ်းရောင်တြိဂံနှင့်အတူခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Done - သင့် application ကို run ပါလိမ့်မယ်။
ဒီနည်းလမ်းရဲ့အားနည်းချက်ကတော့သိသာဖြစ်ပါသည် - ကြောင့် features တွေတစ်အရေအတွက်, သူတို့ကအများဆုံးအတွေ့အကြုံမရှိသေးသော developer များအသုံးပြုရန်အတွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်ကပျမ်းမျှအားဖြင့်အသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသည်မဟုတ်။
Method ကို 2: ပျောက်ဆုံးနေတဲ့စာကြည့်တိုက် Install
သင်ပင် install လုပ်အလတ်စားမပါဘဲ Qt ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အစီအစဉ်များကို run နိုင်သည့်မှတဆင့်တစ်ဦးကရိုးရှင်းတဲ့ option ကို။ ဤနည်းလမ်းကိုသာမန်အသုံးပြုသူများအတွက်သင့်လျော်သည်။
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ qt5core.dll Download နှင့်ဖိုင်တွဲဘယ်မှာသင့်ရဲ့အစီအစဉ်တွင်ပြုလုပ်ထားတော်မူ၏။
လျှောက်လွှာကို run ဖို့ကြိုးစားပါ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သငျသညျကိုအောက်ပါအမှားပေါ်လာတဲ့ရှိသည်။
ဤကိစ္စတွင်လည်းပျောက်ဆုံး DLL ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်နှင့်သင် qt5core.dll installed ဘယ်မှာတူညီတဲ့ directory ကိုဆင်းကြကုန်အံ့။ နောက်ဆက်တွဲအမှားများကို၏အမှု၌, တစ်ဦးချင်းစီစာကြည့်တိုက်များအတွက်ခြေလှမ်းပြန်လုပ်ပါ။
စည်းကမ်းအတိုင်း, Qt သုံးပြီးရေးထားလျက်ရှိ၏ tool များ၏ဖန်တီးသူ, မော်ကွန်းတိုက်၏ပုံစံအတွက်သူတို့ကိုဖြန့်ဝေ, သငျသညျကွာခဏတွေ့လိမ့်မည်ထိုကဲ့သို့သောအမှားများကိုနိုင်အောင်အရာ, အတူတကွ EXE-file ကိုအတူသိမ်းဆည်းထားနှင့် DLL ကို run ဖို့လိုအပ်, ဒါမှမဟုတ် statically shared စာကြည့်တိုက်များနှင့်အတူက executable နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။